Nanatona ny tanora ny Cnaps - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny tanora no ho mpiasa rahampitso na koa ho mpampiasa rahatrizay. Izay indrindra no mahatonga ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy(CNaPS) manatona akaiky azy ireo, mampahafantatra ny momba ny fiahiana ara-tsosialy izay didin’ny lalàna velona eto amintsika ny momba azy io, ka ny CNaPS no natao hiahy izany ho an’ireo eo amin’ny sehatry ny asa tsy miankina na koa ny mpiasam-panjakana Ecd.
Nandritra ny roa andro (21 sy 22 jolay) nanaovana ny hetsiky ny fiaraha-miombon’antoka sy ny fampananan’asa manoloan’ny Lapan’ny tanàna Antananarivo dia nandray anjara navitrika ary nampahafantatra ny asa iandraiketany ny Cnaps ka ny “Fiahiana ara-tsosialy tsy miangatra andraikitry ny rehetra” no novelabelarina ankoatra ireo fanontaniana nanitikitika ny mpitsidika teo amin’ny tranohevan’ny Cnaps.
Nifantoka tamin’ny fandraharahana ny hetsika natao ny 21 sy 22 jolay teo manoloana ny Lapan’ny Tanana. Ny tanora izany no tena nokendrena handray anjara mavitrika tamin’ity hetsika. Minisitera maromaro raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny Fampianarana tekinika sy ny fampananan’Asa andaniny ary ankilany ny Indostria no nandray anjara amin’ny hetsika. Nandray anjara mavitrika amin’ny fanaovana tranoheva ihany koa nefa ny Tahirim-pirenena satria ny tanora no ho mpiasa rahampitso na koa ho mpampiasa rahatrizay. Noho izany, dieny izao dia mila ampahafantarina azy ireo ny momba ny lalàna mifehy ny fiahiana ara-tsosialy izay iandraiketan’ity orinasam-panjakana ity, ka tsy ny mpiasa eo amin’ny sehatra tsy miankina ihany fa ny mpiasam-panjakana Ecd ihany koa dia anisan’ny misitraka ny zo momba izany. eo amin’ny vinan’ny ho avy kosa, efa andalam-pametrahana ny fampitomboana ny sokajin’olona misitraka izany zo izany ny CNaPS ka anisan’izany ireo mpiasa tenany toy ny mpanjono sy ny mpamboly sy mpiompy izay fehezina amin’ny teny tokana hoe tantsaha. Efa eo am-pijerena izany akaiky ny Tahirim-pirenena miaraka amin’ny Tranoben’ny tantsaha saingy mbola tsy vita hatramin’ny farany ny fanadihadiana.
Nampahafantarina sy niresahana mivantana
Koa mandritra izao hetsika ny 21 sy 22 jolay teo, niresaka tamin’ireo tanora maro be tonga nanatona ny tranohevan’ny Cnaps ireo tomponandraikitra. Tao ireo nanadihady lalina ny momba ny asa sahanin’ny Cnaps. Tao kosa ireo efa mpikambana, ka nisy ny olana nosedrain’izy ireo teo amin’ny fahazoana ny zony, ny volan-jaza, ohatra. Tao koa ireo nanana olana momba ny fisotroan-dronono satria efa 20 taona mahery no nitsahatra niasa, efa nihoarana ela ihany ny faha-60 taona nisokafan’ny zo momba ny fisotroan-dronono kanefa tsy nahalala ny pitsopitsony tokony ho natao. Nitondra fanazavana sy nanampy ireny olona samihafa nanana olana ireny ny mpiasan’ny Cnaps. Tao kosa ireo naniry ny hampahafantatra ny momba ny orinasa vao nosokafany sy ny tokony hatao ary tsy vitsy ihany koa ireo efa mpiasa mpikambana eo anivon’ny Cnaps no nijery ny kaontiny, ka afa-po tamin’ny fahazoana valiny mifanaraka amin’ny zava-misy.
Fa ankoatra ny tranoheva, nisy ihany koa ny lahadinika nentin’ny Cnaps tamin’ny alalan-dRandriamasimanana Nivo Sahondra, nanazavany ny momba ny “Fiahiana ara-tsosialy tsy miangatra andraikitry ny rehetra”. Ny asa sahanin’ny Cnaps sy ny atao hoe fiahiana ara-tsosialy no tena novelabelariny tamin’izany. Tetsy amin’ny Hotel Le Grand Mellis Analakely ihany moa no nanaovana izany. Maro ireo liana ary tsy vitsy ireo nametraka fanontaniana. Ny sasany efa am-perin’asa, fa tao ihany koa ireo tanora mbola eo am-pamitana fianarana. Iray amin’ireny i Voahirana izay niaiky ny maha-zava-dehibe ny fiahiana ara-tsosialy satria fanoitry ny asa famokarana noho izy manosika ny mpiasa hamokatra bebe kokoa. Ny fahafantaran’ny mpiasa fa misy fiahiana ny hoaviny, indrindra ny taom-bolofotsiny, hoy hatrany izy dia manosika azy hamokatra bebe kokoa. Tsy fantatra mazava nefa ny momba ireo zo eo amin’ny fiahiana ara-tsosialy ireo raha tsy nanao iny lahadinika sy tranoheva iny Cnaps koa dia nentaniny ny tanora toa azy mba hanatona eny an-toerana amin’ity anio ity fa mahasoa ny fahafantarana izany.